Isbedel-doonka Xisbiga UDUB oo sheegay inay Urur-Siyaasadeed samaysanayaan | Somaliland.Org
Isbedel-doonka Xisbiga UDUB oo sheegay inay Urur-Siyaasadeed samaysanayaan
September 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Cabdillaahi Xusseen Iimaan (Darawal) oo hormood u ah kooxda isbedel-doonka xisbiga talada dalka haya ee UDUB, ayaa sheegay inay samaynayaan urur siyaasadeed cusub.
Cabdillaahi Darawal oo shirjaraa’id ku qabtay Hargeysa, waxa uu Xukuumadda Rayaale ku eedeeyay in aanay doonayn inay dalka doorasho ka qabato, balse damaceedu yahay sidii ay talada u sii haysan lahayd. “Sidaa Waddanka loo burburiyay ayaa xisbigayagiina (UDUB) loo burburiyay oo uu u noqday Xisbi qof iska leeyahay,” ayuu yidhi Wasiirkii hore ee Caafimaadka Somaliland Cabdillaahi Xusseen Iimaan oo isaga iyo koox uu horkacayay laga horjoogsaday Shirweynihii xisbiga UDUB ee horaantii sannadkan lagu qabtay Hargeysa. “Meelna kumaanu biirin, waananu is urursanay oo waxaanu doonaynaa in aanu mustaqbal Siyaasadeed samaynayo. Laakiin, Xisbiyada kale iyo ururada kale waxa naga dhaxeeya sidii nidaamkaa jooga ee doonaya in aanu doorasho qaban aanu kala hawl-galno in meesha laga saaro. Sharcigayagii waanu dhammaynay, waxaananu sugaynay uun inta mugdigan Siyaasadeed laga baxayay, maalmaha soo socda ayaananu magaca isku raacaynaa oo waanu ku dhawaaqaynaa,” ayuu yidhi Mr. Cabdillaahi-Darawal.
Mar la waydiiyay xaalada cusub ee dalku galay iyo heshiiska laga gaadhay khilaafaadkii taagnaa, waxa uu sheegay in Madaxweyne Rayaale isku dayayo sidii uu heshiiskana u carqaladayn lahaa. “Imikana wuxuu samaynayaa gilgilasho, hadday u suurtogalayso,” ayuu yidhi.
Cabdillaahi Xusseen Iimaan waxa uu xisbiyada Mucaaradka ee UCID iyo KULMIYE ku amaanay mawqifyo wanaagsan iyo adkaysi uu sheegay inay u sameeyeen arrimihii dalka ka taagnaa.